Casharka 'Unicorn Cake Tutorial' + Indhaha Bilaashka ah - Video Bilaash Ah
Cunto Cake Cunto
Keega unicorn fudud oo leh timo qaansoroobaad, geeska dahabka ah, iyo indhaha fudud ee dhalaalaya
Qaanso roobaad fudud keega unicorn taasi waa soooocute! Keeggan unicorn waa qaansoroobaad gudaha iyo dibedda! Waan jeclahay sida quruxda badan ee loo dubay rooga qaanso roobaadka loo isticmaalo aniga karinta cad velvet buttermilk karinta . Maandeeq qaansoroobaad boodh lagu rusheeyey rusheeyo iyo gees quruxsan oo geeska unicorn ah ayaa ka dhigaya tan kan qaansoroobaad qaanso roobeed unicorn evah!
Waxaan markii hore u abuuray fasalkan keegga ah ee loo yaqaan 'unicorn cake' gabar saaxiibadeed ah iyo iyada ugu fiican. Waxaan horay u diyaariyey keegga oo aan dhaxan geliyey sidaa darteed waxa kaliya ee ay ahayd inay sameeyaan ayaa ahayd inay qurxiyaan. Runtii aad baan ula dhacay sida wanaagsan ee ay gabdhuhu u sameeyeen tuubbada timaha! Waxa ugu badan ee ay ku dhibtoodeen ayaa ahaa inay soo baxaan baarkooda wanaagsan.
Cunto karinta keeg qaanso roobaad
Ok talaabada ugu horeysa, samee keega. Dufcaddii ayaan karbaashay keega jilicsan ee cad Cuntadan maxaa yeelay waxay dhadhamineysaa AMAZING laakiin sidoo kale waa keeg aad u cadcad sidaa darteed waxay u qaadataa midabka runtii si fiican. Fursadaha kale ee wanaagsan ayaa ah karinta keega cad iyo Doolshe WASC . Keegga Vanilla wuxuu adeegsadaa jaallo ah sidaa darteed baytarku u muuqdaa inuu buluugga cagaar ka dhigayo.
Waan jeclahay sida keegga qaanso roobaadka u noqday! Waa wax aad u xiiso badan in la sameeyo iyo cudur daar weyn oo midab leh!
U qaybi budadaada keega 4 koob.
Waan isticmaalay Midabaynta korontada Ameerika maxaa yeelay waan jeclahay midabbada neon ee dhalaalaya. Waxaan isticmaalay casaan koronto, buluug koronto, jaalle koronto leh, iyo cagaar koronto.
Ku dar 1-2 tsp midabaynta cuntada baaquli kasta isku dar.
Waxaad lakab ka dhigtaa cajiinkaaga keega ah 3 ″ digsiyo keeg ah oo lagu diyaariyey keega goop (sii ​​deynta guriga lagu sii daayo)
Midabkayga waxaan ku dhejiyay si isku mid ah, buluug, casaan, jaalle, cagaar (ku celi).
Waxaad ku karisaa foornada 335ºF illaa 30-35 daqiiqo ilaa cadayga uu ka soo baxayo isagoo nadiif ah.
Isla markiiba ku dhaji keegga miiska dushiisa si aad u siidaysid jeebabka hawada una yaraato yaraanshaha.
U daa qabow 10 daqiiqo ka hor inta aanad ka saarin digsiga adoo ku rogaya keega keega. Qabooji 1 saac kahor dhaxan ama ku duub duub balaastig ah qabowna habeenki oo dhan.
Sida loo sameeyo keega unicorn
Ka dib markii keegaggayga la qaboojiyo, waan xajiyaa oo waxaan ka buuxiyaa qaansadayda fudud ee buttercream-ka waxaanan ku habeeyaa buttercream-ka wax xoqid ah. Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo sameeyo keeg, fiiri casharradayda bilaashka ah ee aasaasiga ah sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya .
karinta keega vaniljka qoyan saliid
Aad ugama werwerayo sidii dhinacyada dhinacyadoodu u fiicnaan lahaayeen laakiin haddii aad raacdo tallaabada ugu dambeysa ee aniga cunto fudud buttercream , waxaad yeelan doontaa buttercream oo qurux badan oo bilaa lacag ah.
Sida loo sameeyo indhaha keega unicorn
Waan ogahay inta keega unicorn badankoodu waxay leeyihiin indho xidhan oo nooc tuubooyin ah si fudud laakiin waxaan doonayay inaan wax xoogaa ka yara sameeyo. Waxaan ahay taageere weyn oo faraskeyga yar iyo anime sidaa darteed waxaan rabay in unicornkeygu yeesho indho badan oo muujiya.
Waxaan u qaabeeyey indhahan indicorn-ka ah ee aad soo dejisan karto oo aad ku daabacan karto adiga oo isticmaalaya daabacahaaga khad ee la cuni karo Aniga ayaa doorbidaya Daabacaadda Canon MG6821 , Photofrost go'yaal sawir oo la cuni karo iyo khad la cuni karo. Iima aysan xirmin hal mar aniguna si dhib leh weligay ma daabicin.
Talooyin ku saabsan daabacaadda sawirrada la cuni karo
Hubso in qalabkaaga daabacan loo qoondeeyay BEST TAYO PHOTO warqaddiisana loo dhigay warqad sawir ah. Haddii kale, waxaad ku heli kartaa xariiqyo iyo xariiqyo ku yaal warqaddaada.
Adeegso warqad sawir ah oo la cuni karo oo jilicsan ama way adkaan kartaa in la gooyo.
Iska yaree sawiradaada adoo isticmaalaya maqas cuticle ama daab x-acto.
Mar alla markii indhahaaga la daabaco oo la gooyo waxaad ku ridi kartaa keega. Aniga tayda ayaan dhigay dhanka hoose ee keega si ay ugu muuqdaan kuwo quruxsan iyo kaartooni. Haddii aad iyaga sare u dhigtid, meel uma bannanaan doontid timaha. Waxaad ka heli kartaa indhaha unicorn-ka bilaashka ah sawir la cuni karo adiga oo emailkaaga geliya soo-saarista boggan. Sawirka waxaa loo geyn doonaa sanduuqaaga.
Sida loo sameeyo geeska keega ee loo yaqaan 'unicorn'
Hadda waa waqtigii la saari lahaa geeska unicorn! Waxaan dhigaa keegga keega ee dusha sare ee madaxa oo waxaan ugu rogaa xoogaa mas ah mas. Hal dhammaad ayaa aad uga sii buuran tan kale.
Ku duub masaska macaan ee ku dhaji ulaha keega si uu u fiican yahay oo u jilicsan yahay. Adeegso gacmahaaga si aad u buuxisid wixii ka banaan ama godadka ku yaal caashaqa. Haddii aadan jeclayn sida ay umuuqato, iska siib oo iskuday markale. Ha niyad jabin haddii ay kugu qaadato dhowr isku day.
Haddii aadan rabin inaad ku mashquusho jacayl, waxaad isticmaali kartaa saaxiibkay cabsi badan caaryada geeska unicorn . Ka buuxi shukulaatada ama isomalt waxaadna uheli doontaa geeska unicorn ee ku habboon keeggaaga!
Rinjiga geeskaaga unicorn-ka oo isku dar ah TMP super dahab ah oo lagu qasay dhawr dhibcood oo aalkolo qamadi ah (Waxaan isticmaalay Everclear) si aad u sameysid rinji qaro weyn. TMP waa mid aan sun ahayn. Noocyo kale oo wanaagsan oo dahab ah ayaa ah farshaxanka la cuno ee rinjiga qurxinta rinjiga metallics .
Sida timaha loogu tuubo keegga unicorn
Hadda qaybta xiisaha leh! Sameynta manka unicorn! Waxaan midab u midabeeyay ilaa 1 koob oo ah buttercream fudud oo midab kasta ah (buluug koronto, cagaar, jaalle iyo casaan). Ku faafi caanaha subaga gabal caag ah (fiiri fiidiyaha) si aad u sameysid rasaasta buttercream.
Gabdhaha fasalkaygu waxay jeclaayeen go'aan ka gaadhista waxa midabbada tabaha ah iyo talooyinka tuubooyinka ay u isticmaali doonaan inay ku tuuraan timaha unicorn!
Dhig xabadda gudaha bacda dhuumaha oo leh caarada xidigta 1M xidigta ah oo bilow inaad sameysid xoogaa rooti ah! Runtii tan iskama khaldami kartid waana tan keenaysa keegga unicorn-ka inuu yahay qofnimo.
Waxaan ku daba-galay rooti-roogayaasha caarad yar oo xiddig ah (ma hubo cabbirka) iyo xoogaa hurdo-hurdi ah. Markaas ayaan ku daray on qaar ka saydhaa ka Sweetapolita (xiriiriye xiriiriye) isku-darka labada geesood ee sixir dheeri ah!
isku darka keega jilicsan ee jilicsan ee sanduuqa ugu fiican
Sida loo sameeyo dhagaha keegaaga unicorn
Waxaan jeclaan jiray si aan u sameeyo dhagahayga unicorn. Kaliya ku duub xoogaa fondant ah kubbad ka dibna wax yar u dhig si aad u sameysid qaab caleen ah. Kala badh u jar si aad u samayso laba dhegood (fiiri fiidiyaha). Waxaan faaruqiyay badhtamaha dhegta tad waxaanan ku booriyay gudaha gudihiisa xoogaa boodh casaan ah.
Dhagaha ayaad si toos ah u saari kartaa subaga hoostiisa wayna ku dhegi doonaan ama waxaad geyn kartaa gabal spaghetti qalalan ah oo aad u isticmaali kartaa inaad ku dhajiso keega. Ha u isticmaalin burushka ilkaha, waa kuwo khatar ah oo afka qofka ka saari kara.
Dhammaystirka keegga unicorn
Waxa ugu dambeeya ee aan sameeyay waxay ahayd tuubbo xuduud yar oo caddaan ah oo ku wareegsan sagxadda keegga oo leh # 4 cirbadda tubbada wareega ah iyo xoogaa subag cad. Uma baahnid inaad qaboojiyaha keega haddii aad cuneyso isla maalintaas. Haddii aad qaboojiso, hubi inaad u keento heerkulka qolka dhowr saacadood ka hor intaadan cunin sidaa darteed subagga wuxuu leeyahay waqti uu ku jilco oo uu mar kale u noqdo macaan.
Hubso inaad daawato casharradayda fiidiyowga ah ee ku saabsan sida loo sameeyo keegga unicorn ee hoose!
Cunto karinta loo yaqaan 'Unicorn Cake'
Sida loo sameeyo qaansoroobaad keega jilicsan ee cadcad oo leh subag fudud! Cuntadani waxay ka dhigeysaa saddex lakab dherer dherer ah 6'x2 '. Kari 335F 30-35 daqiiqo ilaa cadayga uu si nadiif ah uga soo baxayo. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:40 daqiiqado Kalori:823kcal
▢12 oz bur keeg
▢12 oz sonkorta granulated
▢5 oz ukun cad heerkulka qolka
▢4 oz saliidda cuntada
▢10 oz caano subag heerkulka qolka ama in yar diiran
▢6 oz subag aan cusbo lahayn oo jilicsan
▢8 oz ukunta la kariyey
▢32 oz subag aan cusbo lahayn jilicsan qolka qolka (aan dhalaalin)
▢32 oz sonkorta budada ah sifeeyey
Tilmaamaha Cake Velvet Cake
Diyaarso seddex dherer 6'x2 'keeg ah oo leh buskud ama ku buufin digsi. Buuxi weelkaaga qiyaastii 3/4 ee dariiqa buuxa ee batteriga. Waxaa laga yaabaa inaad haysato wax yar oo ka hartay. Kuwaan waxaad ka dhigi kartaa keeg!
Iskusoo wada duub bur, sonkor, budada dubista, soodhaha iyo milixda ku jirta baaquli fiicni dhalada leh lifaaqa galka. Isku qas 10 sekan si aad isugu darto.
Marka xigta, isku dar 1/2 koob oo caanaha ah iyo saliida isla markaana dhinac iska dhig.
U kala qaybi bayteriga afarta koob. Ku dar 1-2 tsp midabaynta cuntada baaquli kasta oo walaaq ilaa inta la isku darayo.
U qaybi baytari saddex 6 'digsi keeg ah oo lagu diyaariyey keeg ama wax kale oo la sii daayo oo la sii daayo. Kariso 30-35 daqiiqo ilaa caday la galiyay bartanka uu si nadiif ah uga soo baxayo laakiin keeggu wali ma uusan bilaabin inuu ka gaabiyo dhinacyada dhinacyada saxanka.
Keega ha ku qaboojino 10 daqiiqo gudaha digsiga ka hor inta uusan soo daadin. Ku siib sariir qabooji oo si buuxda u qabooji. Keegayaga ayaan ku qaboojiyaa qaboojiyaha muddo hal saac ah ka hor inta aan la isticmaalin ama waad ku duuban kartaa caag balaastig ah oo aad ku qaboojin kartaa qaboojiyaha habeenkii.
Tilmaamaha Frosting Buttercream Frosting
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah baaquli fiicni dhalada. Kusoo lifaaq buskudka oo isku dar maaddooyinka si hoose kadibna kor ugu karbaash 5 daqiiqo
U beddel lifaaqa suufka oo isku qas qun yar illaa 15-20 daqiiqadood si aad u sameysid buttercream mid aad u siman oo ka saar goobooyin hawo ah. Tan looma baahna laakiin haddii aad dhab ahaantii rabto dhalaal qabow, ma rabto inaad ka boodo. Hadda waad midabeyn kartaa subaggaaga sida loo baahdo.
Kalori:823kcal(41%)|Kaarboohaydraytyada:131g(44%)|Protein:16g(32%)|Dufan:26g(40%)|Dufan Dufan:18g(90%)|Kalastarol:43mg(14%)|Sodium:428mg(18%)|Kaliumperyamper:365mg(10%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:53g(59%)|Vitamin A:545IU(kow iyo toban%)|Kaalshiyam:175mg(18%)|Bir:3.9mg(22%)
sida loo sameeyo dhadhanka keeg bakeeriga ah sida keega keega
sideen ku ogaadaa in ukuntayda la kariyay
rootiga casaanka jilicsan ee jilicsan ee jiiska barafka
keeg sanduuqa cad keega iskudhaf cuntooyinka leh labeen dhanaan